China Professional Fekitori yeChina SAE J1772 Chikamu 2 Chinogona Kuchinjika Reserve EV Chaja Kugadzira uye Fekitori | Joint Tech
Isu zvakare tinopa chigadzirwa kana sevhisi yekutsvagisa uye ndege yekubatanidza zvigadzirwa uye masevhisi. Isu tine yedu yekugadzira ficha uye yekuwana nzvimbo yebasa. Tinogona kukupai zvirinyore mhando dzese dzechigadzirwa kana sevhisi yakabatana nechinhu chedu chakasiyana cheProfessional Fekitori yeChina SAE J1772 Level 2 switchable Reserve EV Chaja, "Chinja icho chagadziriswa!" ndiyo sirogani yedu, zvinoreva kuti "Nyika iri nani iri pamberi pedu, saka ngatifarirei nayo!" Chinja uve nani!
JNT-EVC10 motokari yemagetsi yekuchaja zviteshi zvinovakwa neRFID kadhi kuverenga kwevashandisi. Iine akasiyana ergonomic dhizaini, inogona kuiswa kumadziro kana chigadziko ichipa akasiyana mutero wazvino. JNT-EVC10 inokutendera kuti uwedzere nyore nyore magetsi emagetsi kuchaja sechibatsiro chakawedzerwa kune vanogamuchira vaeni, mahofisi, masipala, uye zvimwe zvakawanda zvekutengesa zvinhu.
Standard SAE J1772 ™ plug inowirirana neyakawanda-ese magetsi nemagetsi emagetsi emagetsi.
4.3, LCD kuratidza data rese remota pachiteshi chechaji panguva yekuchaja. Unogona kuona mamiriro ekuchaja, kusanganisira zvazvino, magetsi uye tembiricha. Iyo screws inokwana mubhokisi saka haufanire kunetseka nezve iyo skrini inodonha. Iyo 18ft kana 25ft tambo inosiya inokwana nzvimbo pakati pemotokari nechaji chiteshi.
Chiteshi chine leveler yemagetsi inoenzanisa chiteshi kana chishandiso chemagetsi chiri kushanda.
Zvese zvigadzirwa zvedu ETL / CE, mhando yacho yakavimbika. Chaja yedu yeEV inoenderana nemota zhinji dzemagetsi dzinoenderana neSAEJ1772 standard.
Pashure: 7kw EV Mhuri Yekuchaja Cable Chaja neTUV Ce RoHS
Zvadaro: 11.5kw AC EV Chaja Yemabhizimusi Shanduro Yemagetsi Motaja Solar EV Chiteshi
Kuchaja Pile Station
China Bhazi Yekuchaja Chiteshi
China Mugadziri Wemadziro-Akakwira EV Mota Charge
Magetsi Mota Murwi
EV Charger Murwi
Chechitatu Chikamu Cheja
Kupa OEM Kambani Yemagetsi Mota Yekuchaja ...
Chikamu 2, 240 volt mota yemagetsi (EV) chargin ...
SAE J1772 China Mugadziri Wall-akatasva EV Ca ...
Chikamu 2 EV Charger Unit ine Type 1 Outlet 16A ...